Shirkadaha Da'da ee Da 'weyn shelf Nevada Macluumaadka iyo Agabka
Shirkadaha Waaweyn Nevada
Waad dooran kartaa mid ka mid ah Shirkadahaheena Nevada Aged Corporate iyo Shirkadaha shelf ee Nevada. Waxaad ka heli doontaa shirkada Shelf Corporate, Age LLC's iyo xitaa barnaamijyada kobcinta amaahda oo lagu dari karo shirkaddaada. Nevada waxay ku siisaa faa iidooyin badan, si wax badan looga barto Ku darista Nevada, waxaad wax ka baran kartaa faa iidooyinka canshuurta ee Nevada, shuruucda ganacsi ee wanaagsan, noocyada saamiyada ee la soo saari karo mustaqbalka iyo macluumaad isku dhafan oo dheeraad ah.
Faa'iidooyinka Shirkadda Da 'Nevada shelf Corporation
Waxaad isla markiiba bilaabi kartaa inaad ka faa'iideysato lahaanshahaaga ganacsi ee Nevada adoo dooranaya inaad iibsato shirkad horey loogu daray, ama Shirkadda da 'weyn ee Nevada shelf Corporation.
Shirkadaha da'da ah ee Nevada waxay siiyaan faa'iidooyin la mid ah shirkada Nevada iyo waxbadan. Labaduba waa canshuur dakhli dowladeed, waxay leeyihiin shuruuc ilaalin hanti adag iyo asturnaanta lahaanshaha. (Ereyga “shelf”) waxaa loola jeedaa in shirkadda la sameeyay kahor taariikhda wax iibsashada oo ay caadi ahaan fadhisay shelf iyagoo sugaya macmiil u baahan shirkad da 'ah.)
Macaashka iyo Macluumaadka Dheeraadka ah ee Shirkadda Shirkadda Nevada
Milkiileyaasha shirkad da 'weyn oo ku taal Nevada ma ahan arrin diiwaangelin guud ah.
Qarsoodiga - Nevada lama wadaagto macluumaadka shirkada Adeegga Dakhliga Gudaha (IRS). Iyagoo ah dowlad canshuur la'aan ah, ma uruuriyaan macluumaadka noocaas ah si ay ula wadaagaan. (Caadi ahaan, waxaan kugula talineynaa u hoggaansamid buuxda maamulka canshuuraha.)
Ilaalinta Hantida - Kaliya Nevada (sida qoraalkan ah) waxay ilaalisaa saamiyada saamileyda inay lumiyaan saamiyadooda markii shaqsi ahaan la dacweeyo.
Qaab-dhismeedka Degdegga ah & Bixinta - Hay'ad si sax ah loo diyaariyey Nevada Corporation ayaa si dhakhso leh loo xareyn karaa. Shirkad duug ah oo ku taal Nevada ayaa isla markaaba la keeni karaa.
Khidmadaha Cusboonaysiinta Sanadlaha Hoose - Cusboonaysiinta sanadlaha ah oo ay ku jiraan fayl garaynta liiska saraakiisha iyo agaasimayaasha waa $ 125 sanadkiiba macaamiisha badankood marka loo qoro qoraalkan.
Magacaabista Saraakiisha iyo Agaasimayaasha kale - Saami wadayaasha ayaa gacanta ku haya shirkadda. Marka, waad xakamayn kartaa shirkaddaada oo magacaagu kama muuqan doono diiwaannada dadweynaha adiga oo magacaabaya sarkaal saddexaad iyo agaasimeyaal oggolaaday in ay adiga kaaga mid noqdaan diiwaannada dadweynaha. Waxaa jira dad caan ah iyo kuwo kale oo, in kastoo ay si buuxda u hoggaansan yihiin, ay si fudud doorbidaan asturnaanta maaliyadeed iyo isu-sheegashada. Mar labaad, tan waxaa loo isticmaali karaa oo keliya qaab sharci ah, anshax suuban.
Shirkadaha macaashka waxaa soosaara hay'adda IRS “C” ama “S” shirkad. Guud ahaan kuhadalida “C” shirkada waxaa laga canshuuraa si ka duwan saamiyaasha halka shirkada “S” saamileyda ay masuul ka yihiin canshuuraha faa iidada shirkada.
Khidmadaha gobolka ee liiska askarta iyo agaasimayaasha sanadlaha ah ee Nevada hadda waa $ 125.
Ka dhex Raadi Shirkadaha Da'da Weyn ee ku yaal Nevada Inventory
Shirkadda dahacda gaboobay ee FAQ
Xirmooyinka Qaabaynta Shirkadda
Shirkadaha duqeynta gaboobay ee California
Tababbarka Shirkadaha Da'da Weyn
Kordhinta khidmadaha shirkadda shelf shelf
Shirkadaha Da'da ee Da 'weyn iyo Khiyaanooyinka LLC
Shirkadda Shelf iyo Qaamuuska Shirkadaha Da 'ahaan
Macluumaadka Shirkadda Shelf